Momba ny andraikitra manan-danja atokana ho an'ny ankizy kely dia efa nanoratra asa be dia be. Araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana malaza indrindra amin'ny fampiroboroboana ny zazakely dia tokony hikarakara ny ray aman-dreny fa ny sombin-tanin'ny iray taona dia efa nanana fitaovana manokana ho an'ny famoronana - loko, borosy, pensilihazo. Amin'ny voalohany, ny zavatra hitanao amin'ny taratasy dia hitovy kokoa amin'ny blots, fa rehefa afaka kelikely, dia hitantana ilay siansa ilay zaza.
Alternative to borosy
Sarotra ho an'ny ankizy ny mihazona pensilihazo eny an-tanany. Ankoatr'izay dia tsy maintsy voatery handao ny sora-baventy eny amin'ny taratasy. Mora kokoa ny manomboka hosodoko amin'ny loko, fa matetika ny virosin'ny borosy no mahaliana ny ankizy mihoatra noho ny dingan'ny famoronana. Noho izany dia tiako ny manandrana ny borosy! Saingy misy làlan-kaleha - manosotra amin'ny kibony. Tsara kokoa ho an'ny rantsantanana madinika ny mihazona rantsana maivana, ary ny modely dia hivoaka amin'ny tenany. Ity karazana sary ity dia manondro teknika tsy mampiavaka, izay tena tsara ho an'ny ankizy manao dingana voalohany amin'ny fanaovana, izany hoe famelezana.
Etsy ankilany, misy eo amin'ny sary hosodoko ity torolalana ity. Izany dia antsoina hoe pointillism avy amin'ny teny frantsay pointillisme, midika hoe "teboka". Io fomba fiasa amin'ny tazo ketsa ity, izay resahintsika amin'izao fotoana izao, dia manana fototra lalina. Ny razambentsika dia naka sarin'ny tisk - razmochalennoy tapa-doha, navoaka avy amin'ny kambana tsy tapaka. Ankehitriny, ireo sary amin'ny kibon'ny tanimbary, izay mamela na manadio faribolana amin'ny taratasy, dia heverina ho toy ny karazana zavakanto ho an'ny ankizy.
Ny zaza roa taona dia tokony ho liana amin'ny teknika mahavariana sy tsotra toy izany. Ny tombontsoa azo avy aminy dia tsy amin'ny fialam-boly ihany. Rehefa manisy ravinkazo miaraka amin'ny zana-ketsa isika dia mampivelatra ny loko sy ny rhythm. Ny ankizy dia mianatra misaintsaina ireo fahatsapany sy hevitra ankapobeny momba ny tontolo manodidina azy. Ankoatra ny fampivoarana fahaizana matanjaka tsara, dia raisina ny fahalianana amin'ny zavamananaina.
Amin'ny voalohany dia mila ny fanampian'ny olon-dehibe ny ankizy, satria tsy dia mahaliana loatra ny lalao miaraka amin'ny kibon-kibo ho an'ny ankizy. Noho izany, raha mikasa ny hanoritra biriky ny lavenona ianao, lazao amin'ny ankizy fa manidina lavitra ny vorona rehetra amin'ny ririnina, ary ireo bullfrogs dia mitoetra miaraka amintsika. Mba hihinanan-kanina, mila mihinana bozaka izy ireo, kanefa aiza no ahazoan'izy ireo azy? Asaivo manosika rindrina ho an'ny bullfighters ny ankizy. Mamisia giraffa roa, manaova loko misy teboka maranitra. Ary ahoana ny amin'ny namany? Izany ve no hijanonany tsy misy dikany? Ho hitanao fa maniry avy hatrany ny ankizy hanampiana ireo zirafy mahantra ary hikolokolo azy amin'ny alàlan'ny totozy tavy. Amin'ny ankapobeny, ny dingan'ny fananganana kibon'ny tanimboly dia manjary ao ambadiky ny fanoloran'ny ankizy taratasy misy sary vita amin'ny voninkazo efa vita. Amin'ny voalohany dia tsara kokoa ny mampiasa loko loko iray fotsiny, mba tsy hanosihosena ny penina handrafetana volom-boasary na hampifangaro ny loko rehetra. Ny teboka dia afaka manintona izay tianao rehetra - dragona iray, trondro iray, lolo, bibilava, hazo, paoma, sns. Rehefa mihalehibe ilay zaza, dia tsy vita ny asan'ny arofanina. Izy dia afaka mamorona zavatra kely tsy misy fanesoana. Ny asa dia mety ho sarotra amin'ny famenoana ny glitter miaraka amin'ny sparkles. Amin'ny loko matevina dia mametraka mora foana izy ireo, ary aorian'ny fandosirany dia aza miondrika.
Aorian 'ny fanomanana ny tsanganana miaraka amin' ny hazokely fihinanam-be, aoka ho azo antoka ny hiresaka amin 'ilay zazakely ilay sary. Manome toky anareo izy fa hilaza zavatra maro mahaliana izy amin'ny fitohizan'ny tantara izay natombokao. Ary rehefa maina ny loko, dia aforeto ny sary eo amin'ny solaitrabe na ampiasao môtô iray mba hampidirana azy ao amin'ny vata fampangatsiahana mba hahafahan'ilay mpanakanto kely mirehareha amin'ny asa vita.
Fitsipika momba ny pio eo amin'ny lalao amin'ny lalao
Taom-baovao mahatsikaiky chastushki ho an'ny ankizy
Ahoana no fomba ampianarana ny ankizy iray isaina?
Mahazo politika MHI ho an'ny zaza vao teraka
Ahoana ny fomba hampiasana "Barboskin"?
Ny fitsingerenan'ny zaza ao an-trano
Fomba fampandrosoana ny teny ho an'ny ankizy any am-pianarana
Chromium picolinate ho an'ny fatiantoka
Borscht - sakafo 7 ho an'ny tsiro tsirairay
Ahoana no handoavana ny soda amin'ny soda?
Ahoana no hitehirizana ny akoho amin'ny ririnina?
Ahoana no fomba hitazonana ny nono rehefa tsy matavy?
Fety mariazy any Rosia
Ahoana no hanaovana divay mena?
Kitapo ho an'ny hazo
Tao anatin'ilay tambajotra dia nisy seho tsy fantatra tao amin'ny fampisehoana "The Devil Wears Prada"
Ny akanjon'i Baldwin dia mamono mahafinaritra
Tsy nahomby i Serena Williams tamin'ny herinandro faha-35 nahabevohoka
Loza any Crimea
Ahoana ny endriky ny flea amin'ny saka?
Ny akanjo tweed vehivavy